8 Arrimood oo Ay u Fiicantahay Inaad Kaligaa Cunteyso | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — December 15, 2018
Qof walba ma jecla inuu kaligiis wax cuno, sida ay barnaamijka cuntada ku ogaatay wariyaha BBC-da ee lagu magacaabo Sheila Dillon. Balse, iyadoo hadda ku dhawaad kala bar ka mid ah dadka waaweyn ay kaligood cunteeyaan, waxaan shaaca ka qaadnay 8 ariimood oo muujinaya in kalinimada wakhtiga raashinka ay fiicantahay.
1. Waxaad cuni kartaa wax kasta oo aad jeceshahay
Inaad kaligaa wax cuntid waxay fursad kuu siineysaa inaad isticmaashid wax walba oo aad ku faraxsantahay adigoo aan ka walwaleyn dookha dadka kale.
Waxaad xitaa isku dayi kartaa inaad tijaabiso cunto isku dar dar ah, adigoo aan ka cabsaneyn in ay dad kale khasaare ka soo gaarto haddii uu isku daygaaga dhicisoobo.
2. Cidna kulama qeybsaneyso cuntadaada
Waligaa ma dalbatay raashin macaan oo haddana ma ogaatay in dhammaan saaxiibbadaa ay doonayaan iney kula taabtaan? Inkastoo ay fiicantahay in wax la isla qeybsado, haddana kuma farxad galineyso inaad 20% raashinkaagi macaanaa weysid oo dadka kale ay kaa cunaan.
Waxaa laga yaabaa ineysan xiiso lahayn inaad kaligaa wax cuntid, laakiin waxaad fursad u heleysaa inaad raashinka saxankaaga ku jira dhameysatid iyadoo aysan cidna kaa qaadanin hal cantuugo.
3. Kalinimada wax lagu cuno waxay si fudud kuugu ilaalin kartaa inaad raashin caafimaad leh cuntid
Haddii aad isku dayeysid inaad raacdid qorshe aad u dajisay inaad raashin caafimaad leh ku cunto, waxaa suurta gal ah in kalinimada lagu cunteeyo ay arrintaas kaa caawiso.
Cilmi baaris loo gudbiyay xarunta caafimaadka wadnaha ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka cuntooyinka gaarka ah la siiyo ay 60% khatar ugu jiraan iney nidaamka loo sameeyay raaci waayaan, marka ay dad kale wax la cunayaan.
4. Waad ku taagnaan kartaa xilliyada aad wax cuneysid
Cilmi baareyaal ayaa sheegay in sida caadiga ahba aan wakhtiyada raashinkeenna wax ka baddalno innagoo sidaas u sameyneyna dadka aan isku xirannahay awgood.
Mid ka mid ah daraasadaha ayaa shaaca looga qaaday in haweenka da’da yar marka ay wax isla cunayaan ay dadajiyaan raashinka ama boobaan, iyagoo si aad isugu dhow cantuugada isaga daba geeya.
Marka aad kaligaa wax cuneysid waxaa kuu fududaaneysa inaad si aayar ah u cunteysid oo aadan dareemin wax cadaadis ah.
5. Kalinimada lagu cunteeyo waxay kuu sahleysaa inaad diiradda saari kartid dhadhanka raashinka
Markaad kaligaa wax cuneysid waxay cuntada noqoneysaa waxa kaliya ee aad ka fakareysid. Taasi micneheeda waa inaad ku raaxeysaneysid dhadhanka raashinka aad cuneysid, waayo marka aad qof la cunteyneysid waxaa laga yaabaa inuu sheeko kugu mashquulio oo uu kaaga warramo arrimihiisa.
6. Bannaanka ayaad wax iskaga cuni kartaa
In si kalinimo ah bannaanka wax loogu cuno aad uma badna, balse inaad adigoo cunteyneysid daawatid waxa dunida ka socda ayaad ka door bidi kartaa inaad guriga ku dhex jirtid.
Haddaad ka walwaleysid kalinimada aad wax ku cuneysid, iska dhaaf walwalka: kali cunitaanka wuxuu ku soo badanayaa dalka Britain, 87% ka mid ah dadkana waxay sheegeen iney jeclaan lahaayeen iney kaligood cunteeyaan.
Daraasad la sameeyay sannadkii 2015-kii ayaa lagu ogaaday in kalinimada looga cunteeyo makhaayadaha ay laba jibaar noqotay 2 sano gudahood.
7. Ma maqleysid shanqarta dadka kale ee raashinka ruugaya
Haddii ay shanqatra ka soo baxeysa dadka cunteynaya kugu kallifi jirtay inaad kaligaa wax cuntid, hadda waxaa la joogaa wakhtigii aad si nabad ah u cunteyn lahayd.
Inaad kaligaa wax cuntid waxay kaa ilaalineysaa yaqyaqsiga aad dareentid marka aad maqashid shanqarta dadka agtaada wax ku calaanjinaya ama ku laqaya.
8. Waxaad cunteyn kartaa wakhtigaad doontid waxaadna ku cunteyn kartaa meeshaad doontid
Marka aad kaligaa tahay meeshaad rabto ayaad la fariisan kartaa saxankaaga, xitaa waxaa ku dul cuni kartaa sariirtaada. Laga billaabo shaaha aad cabeysid aroortii ilaa cashada habeenkii, mid walba waxaad ku aaddin kartaa wakhtiga aad jeceshahay.
Tags: 8 Arrimood oo Ay u Fiicantahay Inaad Kaligaa Cunteyso
Next post Markasta Waa Inaad Ku Fakartaa Wax Cusub oo Aad Naftaada Ku Horumarinayso
Previous post Qaababka Aas-aasiga Ah Ee Lahaanshaha Ganacsi